31-Jul-2019 to 14:31
Ethiopia faces Lesotho in preliminary World Cup qualifiers
APA-Addis Ababa (Ethiopia) — Ethiopia will take on Lesotho in the first round of the 2022 FIFA World Cup qualifiers for the Africa zone.
31-Jul-2019 to 14:28
Kenya maintains push for ivory markets' closure
APA-Nairobi(Kenya) — Kenya’s First Lady Margaret Kenyatta on Wednesday reaffirmed Kenya’s push for the closure of all ivory trade markets across the world.
31-Jul-2019 to 14:25
Ethiopian parliament defers council elections
APA-Addis Ababa (Ethiopia) — The Ethiopian parliament on Wednesday approved a resolution providing for the postponement by another year of elections of council members for the capital Addis Ababa and Dire Dawa.
30-Jul-2019 to 20:35
Ethiopia earns over $1.2 b from coffee, oilseed exports
APA-Addis Ababa (Ethiopia) — Coffee and oilseeds exports earned Ethiopia over $1.2 billion in the past Ethiopian budget year, which ended on July 7, 2019, according to the Ministry of Trade and Industry.
30-Jul-2019 to 19:00
Ethiopia apply measures to prevent Ebola
APA-Addis Ababa (Ethiopia) — As part of efforts to prevent the spread of Ebola virus into the country, Ethiopia has announced the deployment of more than 290 medical officers nationwide mainly at border entry points.
29-Jul-2019 to 20:37
Ethiopians set new world record for trees planted in one day
APA-Addis Ababa (Ethiopia) — Ethiopians have set a new world record for trees planted in one day.
27-Jul-2019 to 20:17
Foreign companies to operate in Ethiopia’s financial sector
APA-Addis Ababa (Ethiopia) — Ethiopia's council of ministers approved a law providing for foreign nationals of Ethiopian origin to engage in the country's financial sector.